Otu nchịkọta akụkọ ▷➡️ VidaBytes | LifeBytes
Ndụ LifeBytes bụ weebụsaịtị AB Ịntanetị. Na webụsaịtị a anyị na-agwa banyere isi ozi ọma, nkuzi na aghụghọ banyere ụwa nke teknụzụ, egwuregwu na kọmputa. Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ teknụzụ n'anya, ọ bụrụ na ọbara na-aga na veins gị teknụzụ mgbe ahụ Vidabytes.com bụ kpọmkwem ihe ị na-achọ.
Kemgbe ewepụtara ya na 2008, VidaBytes akwụsịbeghị itolite kwa ụbọchị ruo mgbe ọ bụ otu n'ime weebụsaịtị kachasị na ngalaba.
Ndị otu nchịkọta akụkọ VidaBytes bụ otu nke ndị ọkachamara na teknụzụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu otu, ị nwere ike zitere anyị fọm a ka ị bụrụ onye ndezi.
Mgbasa ozi na onye nrụpụta eserese. Na ọzụzụ na-aga n'ihu na mmemme mmemme. Ịmụ ihe niile gbara gburugburu ụwa teknụzụ dị mkpa taa.
Oge mbụ m metụrụ kọmputa aka, adị m afọ iri na asatọ. Tupu m ejisiri ha egwu egwu mana kemgbe ahụ enwere m ike ịtinye ma mụọ sayensị kọmputa dịka onye ọrụ. Ọ bụ eziokwu na m mebiri ole na ole, ma nke ahụ mere ka m ghara ịtụ ụjọ ịnwale na ịmụta koodu, mmemme na isiokwu ndị ọzọ dị mkpa taa.
Profaịlụ nke otu ederede izugbe nke VidaBytes.
Mmelite Taa bụ webụsaịtị a raara nye ụwa ngwanrọ na sistemụ sonyeere VidaBytes afọ ole na ole gara aga ma ugbu a etinyere ọdịnaya niile na webụsaịtị a.
Onye na-ahụ maka ọrụ kọmputa. Nwa akwụkwọ Sistemụ Kọmputa na-achọsi ike inyere onye ọ bụla aka ịmụta maka teknụzụ site na nzọụkwụ.
Netwọk dị na netwọkụ
Redesenred bụ webụsaịtị ochie gbasara Netwọk na Kọmputa bụ akụkụ nke Vidabytes.com ugbu a